Iimali zenziwe njani ngeBhilidi kwi-Congress ye-US
Ngamagunya anikezelwe ngumgaqo-siseko , iUnited States Congress ithatha amawaka amabhilim nganye ngeseshoni . Sekunjalo, kuphela ipesenti zazo eziza kufikelela phezulu kwideskiti yomongameli ukuze kuvunywe okokugqibela okanye i-veto. Ngendlela yabo eya kwiNdlu ye-White House, iindleko zigqithisa umonakalo weekomiti kunye neekomitana , iingxoxo, kunye nezilungiso kumagumbi amabini eCongress.
Oku kulandelayo inkcazo elula yenkqubo efunekayo kwilwayo ukuba ibe ngumthetho.
Ukuze uthole ingcaciso epheleleyo, jonga ... "Indlela Imithetho Yethu Yenziwe Ngayo" (iThala leeNkcazo) Ihlaziywe kwaye ihlaziywe nguCharles W. Johnson, iPalamente, i-United States House of Representatives.
Inyathelo 1: Isingeniso
Kuphela ilungu leNgqungquthela (iNdlu okanye iNational Senate) lingayifaka i-bill ukuba iqwalaselwe. Ummeli okanye uSenethi ozisa umthetho-mthetho uya kuba "ngumxhasi." Abanye abawomthetho abaxhasa inkxaso-mali okanye umsebenzi ekulungiselelweni kwabo bangacela ukuba babhalwe "njengabaxhasi boqhagamshelwano." Iimali ezibalulekileyo zihlala zineenkxaso-mali.
Iintlobo ezine ezisisiseko zomthetho, zonke ezibizwa ngokuba yi "bills" okanye "amanyathelo" ziqwalaselwa yiCongress: iBills , Izigqibo ezilula, Izigqibo eziManyeneyo kunye neZigqibo ezifanayo.
Isibhengezo okanye isisombululo senziwe ngokusemthethweni xa sinikezelwe inombolo (HR # yeeNdlu zeeNdlu okanye i-S. # ze-Bills ye-Senate), kwaye iprintwe kwiNgxelo yeCongress by Office of Printing Office.
Inyathelo 2: Ukuqwalaselwa kwekomiti
Zonke iindleko kunye nezigqibo "zihanjiswe" kwelinye okanye kwiiKomiti zeeNdlu okanye zeeNteti ngokwemigaqo ethile.
Inyathelo lesi-3: Isenzo seKomidi
Ikomidi liqwalasela ibhajethi ngokubanzi. Ngokomzekelo, iKomiti yeeNdlu ezinamandla kunye neKomiti yeNtsebenzo kunye neKomiti yoLwabiwo lweeSenethi iya kuqwalasela umphumo webhiliki ochaphazelekayo kwi- Budget Federal .
Ukuba ikomiti iyavuma i-bill, iyaqhubeka kwinkqubo yomthetho. IiKomiti zilahla iindleko ngokungaze zisebenze kuzo. Iingxowa-mali ezihluleka ukufumana isenzo senkundla kuthiwa "zafa kwikomiti," baninzi.
Isinyathelo 4: Ukuhlolwa kweKomitana
Ikomiti ithumela ezinye iindleko kwikomitana elingaphambili lokuqhubela phambili ukufundisisa kunye nokuvalelwa koluntu. Kuphela malunga nabani na onokunikela ubungqina kula mava. Amagosa karhulumente, iingcali zoshishino, uluntu, nabani na abanomdla kulo mthetho-mthetho bangafaka ubungqina kumntu okanye ngokubhaliweyo. Isaziso salezi zikhalazo, kunye nemiyalelo yokunikela ubungqina ngokupapashwa ngokusemthethweni kwiRejista ye-Federal.
Inyathelo 5: Phawula
Ukuba ikomitana elinqununu lizimisele ukunika ingxelo (ukucebisa) ibhilikhwe kwakhona kwikomiti epheleleyo yokuvunywa, ingaqala ukwenza utshintsho kunye nezilungiso kuyo. Le nqubo ibizwa ngokuba yi "Mark Up." Ukuba ikomidi elincinane livota ukuba lingabhengezi i-bill yekomiti epheleleyo, loo mthetho-mthetho uya kufa khona.
Inyathelo 6: I-Action Action Committee - Ukubika iBhili
Ikomiti epheleleyo ngoku ihlola iingxoxo kunye neengcebiso zekomiti elincinane. Ikomiti inokuqhuba ukuhlaziywa okuqhubekayo, ukubamba iintlanganiso ezingaphezulu zoluntu, okanye ukuvota kuphela kwingxelo evela kwikomitana.
Ukuba ibhili-mali iya kuhamba phambili, ikomiti epheleleyo ilungiselela kunye namavoti kwiingcebiso zayo zokugqibela kwiNdlu okanye kwiSeti. Emva kokuba ibhilikhwe iphumelele ngeli nqanaba kuthiwa "yayalawulwa ingxelo" okanye "yachazwa nje".
Inyathelo 7: Ukupapashwa kweNgxelo yeKomiti
Emva kokuba ibhali-mali ibibiwe (Jonga isinyathelo 6 :) ingxelo malunga nebhiliki ibhaliwe kwaye iphapashwa. Ingxelo iya kubandakanya injongo yowiso-mthetho, impembelelo yayo kwimithetho ekhoyo, iingqalelo zebhajethi, kunye naliphi na irhafu yerhafu okanye ukunyuka kweerhafu eziya kufunwa ngumthethosivivinywa. Ingxelo nayo iqulethe ngokubhaliweyo evela kwiindlebe zomntu kwi-bill, kwakunye neengcamango zekomiti kunye nokuchasene nelo mthetho ochaziweyo.
Isinyathelo 8: Umgangatho wesenzo - iKhalenda yeSigqeba
Umqulu-mali uza kufakwa kwikhalenda yomthetho weNdlu okanye iSeti kunye nokucwangciswa (ngokulandelelana kwexesha) "isenzo somgangatho" okanye ingxoxo phambi kobulungu obupheleleyo.
INdlu inamakhalenda amancinci ambalwa. USomlomo weNdlu kunye neNdlu enkulu yeNkokeli inquma isigqibo sokuthi iinqununu ezichaziweyo ziza kuxutyushwa. I-Senate, inamalungu angama-100 kuphela kwaye iqwalasela iindleko zincinci, inekhalenda eyodwa kuphela yezomthetho.
Inyathelo 9: Ingxabano
Ingxabano kunye nokuchasene neprogram phambi kweNdlu epheleleyo kunye neSeti ngokwemigaqo eqinileyo yokuqwalasela kunye neengxoxo.
Inyathelo 10: Ukuvota
Xa ingxoxo sele iphelile kwaye naziphi na izilungiso kumthetho-mali zivunyiwe, ubulungu obupheleleyo luza kuvota okanye ngokuchasene nelo mthetho. Izindlela zokuvota zivumela ukuvota ngezwi okanye ivoti yokufowunela.
Inyathelo 11: iBill ekhankanywe kwenye iNkundla
Iimithetho ezigunyazisiweyo kwigumbi elinye leNgqungquthela (iNdlu okanye i-Senate) ngoku ithunyelwe kwelinye ikamelo apho ziya kulandela kakhulu indlela efanayo yekomiti yokuxubusha ukuvota. Elinye ikamelo lingavuma, ligatye, liyihoxise, okanye lilungise ibhasoli.
Inyathelo 12: IKomiti yeNkomfa
Ukuba igumbi lesibini ukuba liqwalasele ibhilikhwe liyakushintsha ngokubalulekileyo, "ikomidi yenkomfa" eyenziwe ngamalungu amabini amagumbi aya kubumba. Ikomiti yenkomfa isebenza ukudibanisa ukungafani phakathi kweenguqu ze-Senate neNdlu zeBhili. Ukuba ikomiti ayikwazi ukuvuma, ibhajethi iyafa. Ukuba ikomiti iyavumelana ngokubhekiselele kwinguqulelo ye-bill, bayilungiselela ingxelo echaziweyo utshintsho abaye bacebisa. Bobabini iNdlu kunye neSeti kufuneka ivume ingxelo yenkomfa yenkomfa okanye ibhilikhwe iya kubuyiselwa kubo ukuze iqhube umsebenzi.
Inyathelo 13: Isenzo sokugqibela - Ubhaliso
Emva kokubili iNdlu kunye neNkundla yeeNkundla ziye zavuma i-bhili yefomu efana, iya kuba "yabhaliswe" kwaye ithunyelwa kuMongameli waseMerika.
UMongameli unokusayina ibhili-mthetho kumthetho . UMongameli akanako ukuthatha inyathelo kwi-bill yeentsuku ezilishumi ngelixa iCongress iseshoni kwaye ibhilikhwe iya kuba ngumthetho ngokuzenzekelayo. Ukuba uMongameli uchasene nomthetho-mthetho, unokukwazi "ukuwuvusa". Ukuba akayi kuthatha inyathelo kwi-bill yeentsuku ezili-10 emva kokuba iCongress idibanise iseshoni yesibini, ibhilikhwe iyafa. Eli nyathelo libizwa ngokuba yi "pocket veto."
Inyathelo 14: Ukugqithisa iVeto
ICongress inokuzama "ukunqumla" i- veto ye-bill ye-bill kunye nokuyinyanzela ukuba ibe ngumthetho, kodwa ukwenza oko kudinga ivoti ye-2/3 yi-quorum yamalungu kwiNdlu kunye neSeti. Ngaphantsi kweSiqendu I, iSigqeba sesi-7 soMthetho-siseko wase-US, ngaphezu kwe-veto kamongameli kufuna ukuba iNdlu kunye neNkundla yeeNkundla ivume ukuphakanyiswa kwemilinganiselo engaphezulu kweyesithathu, ukuvota okukhulu kwamalungu akhoyo. Ukucinga ukuba onke amalungu e-Senate kunye nawo onke amalungu angama-435 eNdlu ayenayo kwivoti, umlinganiselo ogqithisiweyo uya kufuna amavoti angama-67 kwi-Senate namavoti angama-21 kwiNdlu.
Ngomthetho weSebe likaRhulumente wase-US
Amagumbi aphezulu aseLas Vegas - Iindawo eziphambili zokudlala i-Poker kumaCasinos aseLas Vegas
Washington College GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Ukuphononongwa kwe-Lehr Propane Outboard Engine
Uluhlu Lwenjani KwiGalofu?
I-Rock ship: I-Navajo Peak engcwele eNew Mexico
Amazwi eSlang neenkcazo ezakukhupha ngaphandle ngo-2010
IJografi yeGulf yaseMexico
Indlela ukuLungiswa koBuninzi boLuntu kuNcedisa ukulwa nokungalingani
Isiqendu soBunye: Izikhokelo, imizekelo, kunye nemiSebenzi
Iingqungquthela ezibalulekileyo zamaBhinqa
Kutheni Abaqhubi beebhayisikili behambisa iingubo zabo?